Xiddiga ugu shactirada badan Liverpool, kan ugu farsamada badan & Waxa uu uga dhigan yahay lambarka 26-aad, Robertson oo taageerayaashiisa uga sheekeyay arrimo badan – Gool FM
(Liverpool) 09 Abril 2020. Difaaca kooxda Liverpool ee Andy Robertson ayaa sharraxay waxa uu uga dhigan yahay lambarka 26-aad, isagoo si toos ah ula sheekeysanayay taageerayaashiisa, waxaana ay wax ka weydiiyeen dhowr arrimood oo quseeya ciyaartoyda Liverpool.
Bulsho dhan 2.5 milyan oo ah taageerayaasha uu ku leeyahay barta Instagram-ka ayaa su’aalo weydiinayay difaaca Reds, waxaa su’aashii ahayd lambarka 26-aad iyo micnihiisa uu kaga jawaabay: “Ma aysan jirin wax ka dambeeya xaqiiqdii.
“Kaliya waxa uu ahaa lambarka ka bannaan kooxda Dundee United markii aan ku biirayay, kaddib waxaa billawday inay waxyaabo kala duwan ay dhacaan sida dhalasha wiilkeyga! Sidaas darteed hadda wax badan ayuu iigaga dhiganyahay.” ayuu ku jawaabay Andy.
Taageere kale ayaa weydiiyay xiddigga ugu farsamada badan kooxda Liverpool, waxaana uu Robertson ku jawaabay Roberto Firmino inuu yahay midka ugu xirfadda wanaagsan kooxdiisa.
Su’aalaha taageerayaasha waxaa sidoo kale ka mid ahaa inuu u xiiso James Milner xiddigga Reds ayaana ku jawaabay in Milner uu yahay shaqsiga ugu horreeya ee uu raadiyo marka uu hurdada ka soo kaco iyo shaqsiga ugu dambeeya ka hor inta uusan seexanin, waa sida uu hadalka u dhigaye.
Waxaana laacibka reer Scotland uu Milner ku tilmaamay midka ugu shactirada ama madaddaalada badan ciyaartoyda kooxda Reds.
Robertson oo si toos ah muuqaal waqti kula qaadanaayay taageerayaasha ku xiran bartiisa ayaa la weydiiyay su’aalo dhawr ah, balse kuwii ugu xiisaha badnaa ayuu ka jawaabay.